ဗီရိုဗီရိုဒီဇိုင်း | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-bestparticleboardfurniture.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ဗီရိုဗီရိုဒီဇိုင်း ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 010-24-3
တံခါးဗီရိုဆွဲယူ Britney 275cm
တံခါးကိုဗီရိုလျှော Britney ၏တံခါးပေါက်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်.အနုပညာထွင်းထုပျဉ်ပြားနှင့်အသားရေနဲ့လုပ်ထားတဲ့အလယ်မှာတီးဝိုင်းပုံမှန် texture အကြားကွာခြားမှု features.စနစ်များကိုပျဉ်ပြားနဲ့လုပ်ထားတဲ့တံခါးများနှင့်အတူပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာဒါဟာအမြင်အာရုံ၌မွေ့လျော်တင်ဆက်.မှောင်မိုက်၌ရွှေနှင့်စနစ်ကပျဉ်ပြားများတွင်သားရေအရောအနှောဂန္အနက်ရောင်နှင့်ရွှေပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည်,သောအာကာသမှဇိမ်ခံခံစားမှုဆောင်တတ်၏.ယင်းဗီရိုအတွင်းပိုင်း,လြှို့ဝှကျသံဘုတ်အဖွဲ့လည်းမရှိ.ဒါဟာအလွယ်တကူသိမ်းဆည်းထားများနှင့်မဟုတ်တော့အိမျတျော၌မဆိုအာကာသကိုတက်ယူနိုင်ပါသည်.
တံခါးပေါက်:18mm E1-V313 စနစ်ကအနုပညာထွင်းထုပျဉ်ပြားနှင့်ဘုတ်များနှင့်သားရေ.soft-လက်ဝဲနှင့်လက်ယာတံခါးများပေါ်တွင်အသုံးပြုပိုမိုနီးကပ်စွာ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestparticleboardfurniture.com/my/wardrobe-cupboard-design-1.html
ဗီရိုဗီရိုဒီဇိုင်း ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဗီရိုဗီရိုဒီဇိုင်း ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ OEM ODM-ကျော် 33,455 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bestparticleboardfurniture.com
Wardrobe Cupboard Design	| Armoire Design	| Spanplatten-Schrank	| шкафы для спальни	| Armario Roupa	| Armadio Guardaroba	| अलमारी कपबोर्ड डिजाइन	| Diseño de armario armario	| Wardrobe kast ontwerp	| مجلس الجسيمات خزانة	| Tủ quần áo tủ thiết kế	| ตู้เสื้อผ้าออกแบบตู้	| Desain Lemari Lemari	| পোশাক কাপবোর্ড ডিজাইন	| Dolap Dolap Tasarımı	| 系統衣櫃設計